Tsvaga maitiro ekubvisa warts paganda | Bezzia
Maitiro ekubvisa warts
Kune vanhu vazhinji vane warts uye chii chiri dambudziko kwavari, kunyangwe hazvo nhengo dzebonde chete idambudziko rehutano. Mamwe ma warts anoita dambudziko rekushongedza. Iri idambudziko rakapararira uye nekudaro tichaona kuti vangadzivirirwe sei uyezve kuti tingaabvise sei kana vatove vakaonekwa mumuviri.
Sangana ne zvishoma nezve warts Izvo zvichatibatsira kubata dambudziko uye kudzivirira zvimwe kubva pakuonekwa mumuviri. Kana iwe ukatevera aya matipi iwe unogona kupedzisira uine iwo anotsamwisa warts ayo asiri eakanyanya kunaka. Iri zvakare idambudziko rekuti mune yakawanda kesi inogona kudzivirirwa.
1 Chii chinonzi warts
2 Maitiro ekudzivirira warts
3 Natural mushonga
4 Bvisa warts
Chii chinonzi warts
ari mhombwe iganda lesion izvo zvinowanzoonekwa nekuda kwehutachiona hwehutachiona hwepillomavirus. Utachiona uhu hunokonzeresa mamwe masero epithelial kuwanda, zvichipa mutswi. Nekudaro, pane mazana emazana emhando dzakasiyana dzehondo, saka ichi chingave chinonyengera chidzidzo. Anenge ese warts haana kukuvadza kuhutano hwedu uye anowanzo kuve ekushambadzira kunetseka. Warts chete inogona kukuvadza ndeye nhengo dzesikarudzi, sezvo iine hukama nemhando yekenza, uye inogona kupararira kuburikidza nekubatana pabonde. Inotaura zvakare nezvezvipuka zvakajairika izvo zvinowanzoonekwa pamaoko, zvipenga zvakatsetseka, zvinoonekwa kumeso nepamhanza, zvipikiri zvinoonekwa pazvipikiri nepasi petsoka, zvinoonekwa pazvitsoka zvetsoka.
Maitiro ekudzivirira warts
Mazhinji eWarts anogona kudzivirirwa asi mamwe kwete, nekuti anogona kuitwa zvakasikwa uye tisina kukwanisa kuzvidzivirira. Muchokwadi kune vanhu vakanyanya kutarisana nehondo kupfuura vamwe. Kunyange zvakadaro, yakawanda warts Vanowanzoonekwa nekuda kwekuderera kwekudzivirira. Kuti tidzivirire kuzvidzivirira kwedu kubva pakuderera, tinofanirwa kudya zvakanaka, kurarama hupenyu hwakanyarara tiine purogiramu yenguva dzose, uye kutiza kunetseka.
Kune rimwe divi, warts dzinogona zvakare kuparadzirwa nekubatana. Ndokunge, kunyangwe isu tisu tine maronda kana kana mumwe munhu anawo, isu tinofanirwa kudzivirira kuvabata uye kana tikadaro isu tinofanirwa kusuka maoko edu nekukurumidza kudzivirira kutapuriranwa kweaya maronda paganda redu.
Pane mimwe mishonga yemasikirwo izvo zvinogona kubatsira iyo wart kusakura kana kutaridzika zvakashata, kunyangwe zvisingatombo bviswe. Aloe vera ine inogadzirisazve paganda uye inowanzo shandiswa pairi kupora mhando dzese dzematambudziko. Inogona kuvandudza ganda redu kunyangwe isingawanzo kupera nehondo.
Izvo zvinokwanisika kushandisa akakosha maoiri ayo anobatsira iro ganda kuve mune iri nani mamiriro. Iyo mafuta emuti wetii Icho chimwe chazvo, nekuti zvakare chakanakira ayo ekurwisa mabhakitiriya uye antiseptic zvivakwa, zvichibatsira kudzikisa kana kudzivirira iwo maronda.
Pane imwe nguva warts yaonekwa paganda pane nzira dzinoverengeka dzinogona kushandiswa kudzipedza, kunyangwe zvisingaite nemishonga yechisikigo. Chinhu chinowanzoitika chinofanirwa kunge chiri chekuenda kunyanzvi kuti uone rudzi rwewart uye kutsvaga nzira yakanakisa yekuibvisa. Imwe yemaitiro ayo inoshandiswa ndeye cryosurgery, umo mvura senitrogen inoshandiswa kuita chando uye kuita kuti idonhe pasina kukuvadza ganda rakakomberedza. Inowanzoitwa muzvikamu zvakati wandei.
Imwe nzira ine shandisa salicylic acid pane wart. Kuti ibudirire, inofanira kuiswa kakawanda pazuva kwemavhiki mushure mekuchenesa ganda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Maitiro ekubvisa warts
Kugadzira muviri kunogeza muviri
Iyo H & M yekutengesa, yeese saizi!